Football Khabar » कोपा अमेरिका : अब तेस्रो स्थानका लागि अर्जेन्टिना र चिली भिड्ने !
कोपा अमेरिका : अब तेस्रो स्थानका लागि अर्जेन्टिना र चिली भिड्ने !
पछिल्ला दुई संस्करण लगातार कोपा अमेरिकाको फाइनलमा भिडेका अर्जेन्टिना र चिली यसपटक तेस्रो स्थानका लागि भिड्ने भएका छन् । ब्राजिलमा जारी प्रतियोगितामा चिली र अर्जेन्टिना दुवै सेमिफाइनलमा पराजित भएपछि उनीहरूले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन् । सेमिमा अर्जेन्टिना ब्राजिलसँग २–० ले पराजित भएको थियो भने चिली आज बिहान पेरूसँग ३–० ले हारेपछि यी दुईको भेट पुनः भएको हो ।
यसअघि सन् २०१६ को फाइनलमा अर्जेन्टिना र चिली भिडेका थिए । जहाँ निर्धारित ९० मिनेटपछि भएको पेनाल्टी सुआउटमा चिलीले अर्जेन्टिनालाई ४–२ ले हराएर उपाधि जितेको थियो । त्यसअघि सन् २०१५ मा पनि फाइनलमा चिली र अर्जेन्टिना नै भिडेका थिए । त्यसबेला पनि चिलीले अर्जेन्टिनालाई पेनाल्टीमा ४–१ ले नै हराएर उपाधि जितेको थियो । कोपामा चिली लगातार अर्जेन्टिनाका लागि तगारो बन्दै आइरहेको छ ।
पछिल्ला दुई संस्करण लगातार च्याम्पियन बन्दा चिलीले दुवै वर्ष अर्जेन्टिनालाई फाइनलमा पेनाल्टी सुटआउटमा निराश बनाएको थियो । त्यसपछि लगातार तेस्रो संस्करण पनि यी दुईको भेट भएको छ । तर, यसपटक फाइनलमा नभएर तेस्रो स्थानका लागि । यो खेल जुलाई ७ तारिखमा हुँदैछ । सो खेलबाट लिओनल मेस्सी र अर्टुरो भिडाल आ–आफ्नो टिमलाई सान्त्वना सफलता लिने दाउमा छन् । फाइनल खेलमा जुलाई ८ मा ब्राजिल र पेरू भिड्नेछन् ।
प्रकाशित मिति १९ असार २०७६, बिहीबार ०४:४७